galmudugnews.com » Maamulka Galmudug Oo sheegay In Maalinta Berito Laga Ciidaya Halkaasi‏
Home » WARARKA » Maamulka Galmudug Oo sheegay In Maalinta Berito Laga Ciidaya Halkaasi‏ Maamulka Galmudug Oo sheegay In Maalinta Berito Laga Ciidaya Halkaasi‏ galmudug on
Aug 19th, 2012 //
No Comment Views 16349Iyadoo inta badan maanta caalamka islaamka gobollada bartamaha iyo koonfurta dalka Soomaaliya ay u tahay maalin ciid ah , ayaa haddana dhinaca kale marka aad eegto waxaan maanta laga Soomin deegaanno badan oo aay ka mid yahiiin maamulada galmudug .
Maamulka Galmudug State ayaa sheegay in maalinta berito ah aay tahay maalinimo ciid ah isla markaasina maanta aheed maalin ramadaan.
Wasaarrada Garsoorka maamulka Galmudug ayaa lagu soo xigtay in bisha aan laga arkin deegaannada Galmudug, sidaa daraadeed maanta dadka ku dhaqan deegaannada Maamulka galmudug aheed maalin ramadan.
Wasiir ku xigeenka Garsoorka oow qaafta iyo diinta Galmudug Cabdulaahi Cali Jimcaale Buduur oo waraysi siinayay warbaahinta ayaa sheegay in deeganada uu ka taliyo maamulkaasi aay tahay maalinta berito ah maalin ciida.
Inta badan gudaha dalka Soomaaliya marka aad eegto waa wax iska caadi ah in leysku khilaafo bilashada bilaha ciidaha iyo Ramadan, taasoo keenta in marka danbe dadku isku mid u wada Ciidin.
Popular post by viewDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 21013 hitsContact US - 19647 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 15740 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 15180 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 13938 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 13875 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 13819 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 13431 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 11772 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo - 11748 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 11727 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11525 hitsTopnews:- Heshiiskii Kampala oo fashil qarka u saaran iyo Iscasilaadii Farmaajo !! - 11505 hitsDhageyso Sarkaal Mareexana oo Hawiye si xun u caayay - Bashiir Jeneral Dhiin - 11357 hitsWariye qiimeen ku sameeyay sababaha Al-Shabaab uga baxeen Muqdisho - 11168 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11154 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 11054 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 11041 hitsDilaagii Khaarijiyay Agaasimihii Waagacusub oo Muqdisho lagu dilay - Walaalkii oo seexan La? - 10764 hitsWarar yahanka kooxda Realmadrid Cristiano Ronaldo oo jebiyay rikoorka gool dhalinta Horyaalka Spain - 10352 hitsKhaliif weyne oo Qaar ka mida beelaha Sacad caayay- Yaab - 10270 hitsDaawo Wareysigii ugu xiisaha badnaa taariikhda oo Faysal Cali Waraabe lala yeeshay - 10235 hitsXaaskii Adan Xaashi Ceyrow oo joogta Pakistan. - 10012 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 9948 hitsDaawo xiisadii ka dhalatay heshiiskii Ankara oo cirka isku shareertay -Wasiirkii Khaarijiga TFG oo cambaareeyay - 9785 hits Home About